သူငယ်ချင်း မြင့်မြတ်ဟာ ဘယ်သူ့ကိုမှ အမုန်းတရားမရှိသလို ဘာမှပြောဆိုခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးဆိုတဲ့ ယုန်လေး | CeleTrend
August 11, 2020 by CeleTrend
နိုငျငံကြျောအဆိုတျော ယုနျလေးဟာ မကွာသေးမီကမှ ငါတို့အားလုံးရဲ့မွေ သီခငျြးနဲ့ပတျသကျပွီားဝဖေနျမှုတှမြေားစှာရှိနခေဲ့ပွီးနောကျမှာတော့ သရုပျဆောငျ မွငျ့မွတျဦးဆောငျပွီး OG Crew တှပေါဝငျတဲ့အဖှဲ့ဟာ ယုနျလေးအတှကျ ရုပျရှငျအစညျးအရုံးမှာ တောငျးပနျပေးဖို့ သှားရောကျခဲ့ပါတယျ။ ထိုဖွဈရပျကွောငျ့ ပရိသတျတေါကတော့ ယုနျလေးအပျေါထားတဲ့ မွငျ့မွတျရဲ့ မိတျဆှသေူငယျခငျြးကောငျး ပီသမှုကိုခြီးကြူးခဲ့ကွပါတယျ။
ခြီးကြူးလေးစားတဲ့ပရိသတျတှရှေိသလို ပုတျခကျဝဖေနျပွောဆိုတဲ့ ပရိသတျတှရှေိခဲ့ကာ ယနမှေ့ာတော့ အဆိုတျော ယုနျလေးဟာ သူငယျခငျြးဖွဈသူ မွငျ့မွတျရဲ့ စိတျသဘောထားကို ပရိသတျတေါကို ဖှငျ့ပွောလာခဲ့ပါတယျ။ ယုနျလေးကတော့ မွငျ့မွတျရဲ့စိတျသဘောထားကို “ကြှနျတေျာ့ သူငယျခငျြး မွငျ့မွတျသညျ ကြှနျတေျာ့ကို အတူတူရှိပွီး မဖွဈသငျ့တာ မဖွဈအောငျ အားပေးခဲ့တယျ . ထိနျးပေးခဲ့တယျ .ဘယျသူ့ကို မှအမုနျးတရားမရှိပါ .ဘယျသူ့ကို မှ လညျး ဘာမှ ပွောဆိုခငျြးမရှိပါခငျမြား ကြှနျတျောလညျး စိတျသကျသာ သှားရငျ Fb ပွနျသုံးပွီး . အရငျလို ပုံမှနျ ပွနျလညျပတျပါမညျခငျမြား” ဆိုပွီးသူ့ရဲ့ လူမှုကှနျရကျ စာမကျြနှာမှာ ဖျောပွခဲ့ပါတယျ။
ပရိသတျကွီးရေ နိုငျငံကြျောမငျးသားခြော မွငျ့မွတျဟာ သူငယျခငျြးဖွဈသူ ယုနျလေးတဈယောကျအခကျအခဲကွုံနခြေိနျမှာ အတူတူရှိပွီး မဖွဈသငျ့တာမဖွဈအောငျ အားပေးခဲ့၊ထိနျးပေးခဲ့တာပါတဲ့။ ယုနျလေးကတော့ မွငျ့မွတျဟာ ဘယျသူ့ကို မှအမုနျးတရားမရှိပါ .ဘယျသူ့ကိုမှလညျး ဘာမှပွောဆိုခငျြးမရှိပါဘူးတဲ့နျော။
နိုင်ငံကျော်အဆိုတေ်ာ ယုန်လေးဟာ မကြာသေးမီကမှ ငါတို့အားလုံးရဲ့မြေ သီချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီားဝေဖန်မှုတွေများစွာရှိနေခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ သရုပ်ဆောင် မြင့်မြတ်ဦးဆောင်ပြီး OG Crew တွေပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဟာ ယုန်လေးအတွက် ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးမှာ တောင်းပန်ပေးဖို့ သွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ထိုဖြစ်ရပ်ကြောင့် ပရိသတ်တေါကတော့ ယုန်လေးအပေါ်ထားတဲ့ မြင့်မြတ်ရဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းကောင်း ပီသမှုကိုချီးကျူးခဲ့ကြပါတယ်။
ချီးကျူးလေးစားတဲ့ပရိသတ်တွေရှိသလို ပုတ်ခက်ဝေဖန်ပြောဆိုတဲ့ ပရိသတ်တွေရှိခဲ့ကာ ယနေ့မှာတော့ အဆိုတေ်ာ ယုန်လေးဟာ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ မြင့်မြတ်ရဲ့ စိတ်သဘောထားကို ပရိသတ်တေါကို ဖွင့်ပြောလာခဲ့ပါတယ်။ ယုန်လေးကတော့ မြင့်မြတ်ရဲ့စိတ်သဘောထားကို “ကျွန်တော့် သူငယ်ချင်း မြင့်မြတ်သည် ကျွန်တော့်ကို အတူတူရှိပြီး မဖြစ်သင့်တာ မဖြစ်အောင် အားပေးခဲ့တယ် . ထိန်းပေးခဲ့တယ် .ဘယ်သူ့ကို မှအမုန်းတရားမရှိပါ .ဘယ်သူ့ကို မှ လည်း ဘာမှ ပြောဆိုချင်းမရှိပါခင်များ ကျွန်တော်လည်း စိတ်သက်သာ သွားရင် Fb ပြန်သုံးပြီး . အရင်လို ပုံမှန် ပြန်လည်ပတ်ပါမည်ခင်များ” ဆိုပြီးသူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးရေ နိုင်ငံကျော်မင်းသားချော မြင့်မြတ်ဟာ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ယုန်လေးတစ်ယောက်အခက်အခဲကြုံနေချိန်မှာ အတူတူရှိပြီး မဖြစ်သင့်တာမဖြစ်အောင် အားပေးခဲ့၊ထိန်းပေးခဲ့တာပါတဲ့။ ယုန်လေးကတော့ မြင့်မြတ်ဟာ ဘယ်သူ့ကို မှအမုန်းတရားမရှိပါ .ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း ဘာမှပြောဆိုချင်းမရှိပါဘူးတဲ့နော်။